Unyana wam kufuneka anciphise umzimba, ndingamnceda njani? | Oomama Namhlanje
UAlicia tomero | 15/05/2021 16:00 | Unonophelo, Ukutya, ZeMpilo
Namhlanje njenge Usuku lweYurophu ngokuchasene nokukhuluphala Sifuna ukugxininisa ukuba ubunzima obugqithisileyo asiyongxaki yobuhle ekufuneka ilungisiwe ngenxa yesi sizathu, kodwa kunoko xa ingxaki yobunzima inganakho ukuba nefuthe kwizifo ezingapheliyo. Ingxaki inokunxulunyaniswa nabantwana, ngakumbi oomama abajonga xa umntwana kufuneka ehlile emzimbeni.
Ukutyeba kakhulu yinto ebaluleke kakhulu, kuba baninzi abantwana abanale ngxaki incinci. Akululanga ukuxelela xa kufuneka uqaphele ukuba umntwana wakho utyebile, kuba umntwana ngamnye ukhula ngokwahlukileyo kwaye sikholelwa ekubeni inokuba yeyethutyana. Ewe kuyinyani ukuba amanqatha omzimba ayatshintsha ngokwamanqanaba okukhula phakathi kwamakhwenkwe namantombazana, kodwa singaqala ukuya xa sinakho uncede ungagqithisi.
1 Vavanya ukuba umntwana wakho utyebile na
2 Ndingamnceda njani umntwana wam anciphise umzimba?
Vavanya ukuba umntwana wakho utyebile na
Kukho oko vavanya xa umntwana wakho etyebe kakhulu, etyebe kakhulu okanye utyebile emzimbeni. Oko kugqitywe ngobude kunye nobudala, ukwenza ukubala kwezibalo. Hayi kuba umntwana wakho enobunzima obungaphezulu komndilili wabantwana bonke abakwiminyaka yakhe kwaye uzakutyeba, kodwa ezinye izinto zinento yokwenza nayo.
Ukucoca amathandabuzo sinokuyifumana eyakho BMI. Kuya kufuneka sahlule ubunzima ngeekhilos ngobude ngeemitha zesikwere kwaye ukuze sazi idatha echanekileyo esinokuthi siyibeke kuyo idatha esi sixhobo iziphumo ziya kukumisela phi.
Ukuba akho I-BMI yi-18,5 unobunzima; xa yakho I-BMI iyi-18,5 ukuya kuma-24,9 ubunzima bakho buqhelekileyo; ukuba eyakho I-BMI iphakathi kwama-25 nama-26,9 Ukutyeba kakhulu; okanye ukuba i-BMI yakho ingaphezulu kwama-27 utyebe kakhulu. Ukuba umntwana wakho une-BMI ephezulu otyebe kakhulu kwaye utyebe kakhulu kwaye kufuneka anciphise umzimba, apha Ungajonga ukuba ungakanani ubunzima obufanele ukubulinganisa ukufikelela kwisisindo sakho esifanelekileyo.
Ndingamnceda njani umntwana wam anciphise umzimba?
Kukho oko yenza uthotho lwemikhwa esempilweni kwaye uguqule indlela ophila ngayo. Kukho abazali ababhenela ekuboneni ugqirha wabo ukulungiselela utshintsho olusempilweni noluyimfuneko kwindlela otya ngayo. Kwelinye icala, abazali banokunceda kakhulu kuthotho lweengcebiso:
Ngaphakathi kwale mikhwa yile akukho ndlela yokuphila. Uninzi lwabantwana luqhotyoshelwe kwizixhobo ze-elektroniki nakumabonwakude, apho kufuneka sizilinganisele kwiiyure ezimbini ngosuku ubuninzi. Kuya kufuneka ubakhuthaze ukuba bahambe ngakumbi, ukwenza umdlalo othile okanye ukubasa epakini ukuya kudlala nabahlobo babo. Ngokufanelekileyo, kufuneka bavuke ukuya kwimizuzu engama-60 yokuzivocavoca imihla ngemihla.
Indima yabazali ibalulekile ukuze ube nokutya okufanelekileyo. Kuya kufuneka uqale utye ngendlela esempilweni, ususe ikakhulu zonke ezo ukutya okunotyebileyo kumanqatha, ngakumbi i-hydrogenated kunye nezo ziqulathe iswekile.
Kukho oko faka ukutya okuphezulu-fiber ukuze baphucule amathumbu abo kwaye bazigcwalise ngokulula, oko ke kunciphisa indlala kwiiyure emva koko. Ukutya okucetyiswayo ziziqhamo kunye nemifuno, iimbotyi kunye nayiphi na icarbohydrate apho zinokuphelela khona.
Ideri kukutya okunesondlo kakhulu kwaye abazali abaninzi batsiba amafutha abo kwabo baqeqeshwayo. Ngokomgaqo, akuyomfuneko ukuyibuyisela ngaphandle kokuba kubonisiwe yingcali yesondlo. Kodwa ewe kufuneka zilawulwe yimilinganiselo eyimfuneko imini yonke kwaye uyixube nokutya okunempilo kakhulu.
Kule mikhwa mihle usempilweni kufuneka ukwenze oko ishedyuli yokulala rhoqo. Kufuneka ulale iiyure ozifunayo kwaye uphumle kakuhle. Uxinzelelo, ukuphazamiseka, okanye ukudinwa kunokubangela ukuba umzimba wakho ukucele ukuba utye kwaye ube nexhala lokuyidinga xa ingafuneki.
Phakathi kwazo naziphi na ezi ngcebiso, kubalulekile ukuhlala ungakususi ukutya okunokunceda ukukhula okufanelekileyo kokutya kwabo, kuba umntwana kufuneka atye yonke into ukuze akhule ngaphandle kwengxaki. Ewe kubalulekile ukuzama ukwenza umntwana inokuhamba ngakumbi ngomdlalo okanye umsebenzi owuthandayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Unonophelo » Ukutya » Unyana wam kufuneka anciphise umzimba, ndingamnceda njani?